Madaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay geerida Cabdi Cabdulle Siciid
Madaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay geerida siyaasi Jini Boqor
By WARIYAHA QARDHO , GAROWE ONLINE
Alle ha u raxmadee, Jini Fiqi oo kamid ahaa aas-aasayaashii Puntland ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay Soomaaliya.
QARDHO, Puntland – Madaxweynaha dowladda Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni, ayaa ka tacsiyeeyay geerida naxdinta lah ee ku timid siyaasi Cabdi Cabdulle Siciid oo loo garan ogan yahay Jini Boqor.
Marxuumka wuxuu saaka ku geeriyooday magaaladda Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. Isla degmadaas ayaa qorshuhu yahay in lagu aaso. Fahfaahinta sababta uu u geeriyooday lama shaacin.
Sidda lagu sheegay war-saxaafadeed lasoo dhigay boogga Puntland State House ee Facebook, Deni ayaa naxariista EBBE u rajeeyay Jini Boqor isla markaana uu ka waraabiyo Janatul Firdowza.
Hoos ka akhriso qoraalka Madaxtooyadda
Innaa Lillaahi Wa Innaa Illeyhi Raajicuun.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaya magaca Dowladda iyo kan Shacabka Puntland, waxa uu ka tacsiyaynayaa Geerida Cabdi Cabdulle Siciid (Jini Boqor), oo saaka ku geeriyooday Qardho.
Alle ha u naxariistee Cabdi Cabdulle Jini Boqor wuxuu ka mid ahaa asaasayaashii Puntland, wuxuu waxbadan kasoo shaqeeyay horumarka iyo dowladdnimada isagoo xilal kasoo qabtay Puntland iyo Soomaaliyaba.
Madaxweyne Deni waxa uu tiiraanyada Geeridaasi la qaybsanayaa shacabka Puntland,eheladii, qaraabadii, qoysaskii iyo awlaaddii uu ka baxay marxuum Cabdi Cabdulle Siciid (Jini Boqor), waxaana uu Alle uga baryayaa inuu dembigiisa dhaafo samir iyo iimaanna kasiiyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland, ehelkiisii iyo qaraabadiisiiba.
Alle ha u raxmadee, Jini Fiqi oo kamid ahaa aas-aasayaashii Puntland iyo mas'uul xilal kala duwan kasoo qabtay Soomaaliya wuxuu mar isku soo sharaxay xilka ugu sareeya waddanka ee madaxweynaha.
Deni oo meesha ka saarey in iskaashiga cusub uu la xiriiro siyaasad
Puntland 14.05.2019. 15:06
"Maadaama ay Puntland tahay walaal ka weyn, waxaan awoodno waan ku kaalmeynaynaa," ayuu yiri madaxweynaha.
Madaxweynaha Puntland oo Xukuumadiisa horgeeyay Baarlamanka
Puntland 16.02.2019. 11:04
Deni oo magacaabay Guddiga Gurmadka Fatahaada Qardho
Puntland 29.04.2020. 01:35
Deni: UNICEF waxqabadkeeda haku saleyso baahiyaha jira
Puntland 19.06.2019. 17:26
Puntland oo joojisay dhismeyaasha iyo deegaameynta dhul-daaqsimeedka
Puntland 06.07.2020. 07:20
Madaxweyne Deni oo gudoomiye cusub u magacaabay gobolka Mudug
Puntland 27.06.2020. 15:25
Puntland oo shuruud ku xirtay ka qeybgalka shirka Senate-ka ku baaqay
Puntland 10.06.2020. 01:45
Deni oo ka tacsiyeeyay geerida Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya
Puntland 01.04.2020. 17:14
Waqtiga dib loo bilaabayo bixinta baasaboorada oo la shaaciyey 11.07.2020. 10:30
Donald Trump oo farageliyey xukun lagu riday siyaasi ay saaxiibo yihiin 11.07.2020. 10:15
Maxkamadeynta Soomaali u xiran burcad-badeednimo oo la muddeeyay 11.07.2020. 09:00
Mas'uul uu magacaabay Muuse Biixi Cabdi oo is-casilay 11.07.2020. 08:30
Diblumaasi kasoo shaqeeyay Soomaaliya oo xil loo magacaabay 11.07.2020. 07:55
Ilmo yar oo kamid ah dad wax ku noqdey qarax ka dhacay Kismaayo 11.07.2020. 06:30